July 4, 2020 1606
मायाप्रेम तथा पतिपत्नी बीचको सम्बन्धमा विश्वास’को वातावरण मजबुत भएर जानेछ । पारि’वारिक माहोलमा दिन बित्न तथा मिष्ठान्न भोजनग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछि पारेर आफू अगाडी बढ्ने समय रहेको छ भने प्रविधिको प्र’योग गरेर निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
मायाप्रेम तथा दा’म्पत्य जीवनको गाठो झन् मज’भुत भएर जानेछ । कुरा काट्नेहरु प्रशंसा गर्दै हिँड्नेछन् । पुरानो रोग निको भएर जाने तथा पुराना सम’स्या हल भएर जानेछ । खो’जमुलक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । मावली पक्षबाट तपाईंको काममा सहयोग हुनेछ ।
पढाइ लेखा’इमा अरुभन्दा एक कदम अगी बढि नति’जा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक ‘तथा मानव निर्मित स्रोत साधनको प्राप्तिको योग रहेको छ । सन्तान तथा छोराछोरीको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर ‘जानेछ । कृषि तथा पशु’पालन व्यावसायमा समय व्यातित हुनेछ ।
जनताको काम गर्न सक्दा’मात्र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । खोज तथा अनुसन्धानमा उपलव्धी मु’लक नतिजा नआए पनि आगामी दिनहरुमा का’म गर्न सहज हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीरण गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
दाजुभाई तथा छिमेकीबाट तपाईंले शुरु गरेको का’ममा सहयोग तथा समर्थन हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । मायाप्रेममा एक अर्काको भावना बुझ्न सकिने हुँदा थप प्र’गाडता बढेर जानेछ । पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडी बढ्ने योग रहेकोछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमा’नसमा लैजान सकिनेछ ।
आफन्त तथा परिवारको साथ रहने हुदा उप:लव्धी मुलक कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुनेछन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा समय खर्चिने हरुका लागी स:मय घातक रहेकोछ । प्रेममा रमाउ:न चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिने हुनाले एक अर्कालाई विश्वास गर्दै जान सकिनेछ ।
पढाइ लेखाइमा प्रविधिको सहयोगले प्रतिस्पर्धी:हरुलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परि:वार तथा आफन्त बीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा विलासी वस्तुहरुको प्रयोगमार्फत् अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । रा:जनीति तथा समाजसे’वामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
स्वास्थ्यमा गडबड आई दैनिक काम::काज बिग्रने खतरा रहेकोछ सचेत रहनुहोला । व्यापारमा लगानी गर्न केहि समय पर्खनु राम्रो रहेकोछ । तरपनि बिदेशमा उत्पादिन सामानहरुको व्या:पार फस्टाएर जानेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने तथा अल्छि गर्नाले नतिजा बिग्रनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले तथा नचाहादा नचा:हादै टाडिनु पर्दा मनमा नरमाईलो लाग्नेछ ।
साथीभाई तथा नातागो’ताबाट सहयोग पाइने हुनाले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिनेछ । माया प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने पति पत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक धन तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरी आम्दानीका स्रो’तहरु बढाउन सकि’नेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
माता पिताको सहयोगले राम्रा कामगरी समा’जमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापार’मा मन्दी आउने तथा घाटा लाग्नेछ । आफ्ना विचा’रहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
सुविशिष्ट व्याक्तिहरुलाई आफ्नो बहसमा ल्याएर काम लिन सकिनेछ । प्रविधिको सहयोगले पढा’इ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ । खोज तथा अ’नुसन्धानमा समय लगानी गर्नेहरुले सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सक्नेछन् भने माया प्रेममा सामि’प्यता बढेर जानेछ ।
। आफन्त’ तथा आफूले मन पराएको मानि’ससँग दुरी बढ्ने योग रहेकोछ । अध्ययनमा मन नजादा गुरुवर्ग तथा आफन्तको गाली खाईनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साध’नको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला, समय मध्यम रहेको छ । आफ्ना विचारहरु जन’मानसमा लैजान सकिनेछ ।
Prevयस्तो परिवार : जसमा बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज! बाबुआमा, छोराको यस्तो थियो पहिलो उडान !
Nextआज असार २१ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…